Ezahlukileyo 1BR e Bahar 6 JBR
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDeluxe Holiday Homes
UDeluxe Holiday Homes unezimvo eziyi-1057 zezinye iindawo.
Kuluntu oluselunxwemeni lwaseDubai, yonwabele ukuhlala kule mihla yeholide yekhaya. Iindonga zeglasi kuyo yonke indawo zikuvumela ukuba uthathe umbono omangalisayo we-JBR ejikeleze i-marina eyenziwe ngabantu kunye nezakhiwo eziphakamileyo. Yibize imini kwaye uphumle kwi-terrace ngombono owanelisayo. Zama imisebenzi yasemanzini ekufikeleleni ngengalo ukukhulula umntu wakho ongaphakathi.
I-Bahar 6 yinxalenye ye-JBR kwaye ijikelezwe ngamaziko ahlukeneyo orhwebo kunye nezezimali. Ziquka iibhanki, iindawo zokutyela, iipaki zokonwabisa kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa. Ngenxa yemekobume yayo enobuhlobo kusapho kunye nezinto eziluncedo ezibonelelwayo, le ndawo yokuhlala ibalwa phakathi kwezona ndawo zintle zokuhlala iintsapho eDubai. Iindwendwe ziya kuthanda ukufikeleleka koku kulandelayo: iivenkile ezinkulu ezingqongileyo; iindawo zokutyela ezifana neWagamama, Eggospectation, Starbucks, njl. iindawo zokumisa iibhasi kunye nezikhululo zemetro; kunye noLwandle.
Izinto eziluncedo zePropati:
✓ Igumbi lokuhlala elineSofa kunye ne-Smart TV
✓ Vula Ikhitshi elinezixhobo zokupheka ezigqibeleleyo kunye neZixhobo zombane
✓ Indawo yokutyela
✓ I-En-Suite Bedroom ene-King Bed
✓ Igumbi lokuhlambela eligcweleyo
✓ Igumbi lomgubo
✓ Ifakwe ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe, ilungele ukungena
✓ Zonke izinto eziluncedo zibandakanyiwe (Umbane, amanzi, isantya esiphezulu se-Intanethi, iTV eneeChaneli zeCable, AC/Chiller)
✓ Ukufikelela kuzo zonke izakhiwo/izibonelelo zoluntu zabahlali ezifana nephuli kunye nejimu.
✓ Iqela logcino lwendlu – umnxeba nje.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-1 057 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
IJumeirah Beach Residence yindawo yokuhlala elunxwemeni eqhayisa umgama wonxweme oluyi-1.7 km phakathi kwesithili esikhulu saseDubai Marina. Uphuhliso luqhayisa ngeqela elikhethekileyo lezakhiwo ezinesanti. La maqela eendawo zokuhlala asemva kwexesha kodwa ahluke kwiinqaba ezibengezelayo ezibonwa kwi-emirate. Kwakhona, le hotspot yenzekayo eDubai inokuninzi enokunika abahlali bayo, ukusuka kubomi obutofotofo becala lolwandle ukuya kwiindawo zokutyela eziphezulu kunye nezinto ezinomdla.
Umbuki zindwendwe ngu- Deluxe Holiday Homes
Izimvo eziyi-1 057
Singathanda ukuva kuwe: Iofisi yethu isebenza iintsuku ezisi-7 ngeveki, iintsuku ezingama-365 ngonyaka. Iqela lethu logcino liyafumaneka ukuze liphendule yonke imibuzo yakho yokubhukisha kwangaphambili ukususela ngentsimbi yesi-9 kusasa ukuya kweyesi-9 ebusuku kwaye iqela lethu lenkxaso lisebenza ngamaxesha awandisiweyo kwaye liyafumaneka ukususela ngentsimbi yesi-9 ukuya kweye-12 ezinzulwini zobusuku ukuze likuncede ngayo nayiphi na imiba onokujamelana nayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Singathanda ukuva kuwe: Iofisi yethu isebenza iintsuku ezisi-7 ngeveki, iintsuku ezingama-365 ngonyaka. Iqela lethu logcino liyafumaneka ukuze liphendule yonke imibuzo yakho yokubh…
Iilwimi: English, Русский, Tagalog, Українська
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R8756